JINGHPAW KASA: ရှဒန့်ပါအနီး တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား
နိုင်ဝင်ဘာ (၁၂) တနင်္လာ
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ တပ်မဟာ (၅) နယ်မြေဖြစ်သော ရှဒန့်ပါ ဘက်သို့ ထိုးစစ်ဆင်လာသော ဗမာအစိုးရ စစ်တပ် ခမရ (၃၈၉) တပ်များနှင့် ကေအိုင်အေမျိုးချစ်ရဲဘော်များ နိုင်ဝင်ဘာ (၁၁) ရက်နေ့ မနက် (၉း၀၀) နာရီ အချိန်ခန့်တွင် ရှဒန့်ပါအနီး တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ တိုက်ပွဲ သတင်းအပြည့်အစုံကို မသိရှိရသေးပါ။
There wasabattle between KIA patriotic troop and Burmese light infantry unit (389) in Sha Dan Pa village, KIA’s (5th) Brigade area, on 11th November according to KIA front-line report. At 9:00 AM on that day, Burmese light infantry unit (389) launched an offensive action to the KIA’s area of Sha Dan Pa village. No detail report is coming yet.